Izindaba - Yiziphi izinhlobo zezindwangu ezisetshenziselwa ifenisha?
Yiziphi izinhlobo zezindwangu ezisetshenziselwa ifenisha?
Ngokusho kwezindwangu ezehlukene, ifenisha ephakanyisiwe ingahlukaniswa ngesikhumba, isikhumba sokufakelwa, indwangu, njll. Indwangu yefenisha yesikhumba ephakanyisiwe iyisikhumba sesilwane, indwangu yefenisha yesikhumba yokufakelwa iyisikhumba sokufakelwa, kanti indwangu kasofa wendwangu ngoboya , i-hemp, ukotini, i-fiber yamakhemikhali nezinye izindwangu. Ngokuya ngezinto ezehlukene zamathambo zefenisha ethambile, ingahlukaniswa ibe ngamathambo enkuni, amathambo ensimbi nefenisha ethambile ngaphandle kwamathambo. Uhlaka lwokhuni ifenisha ethambile iyifenisha ethambile enezinto zokhuni njengamathambo ayo. Ifenisha yensimbi ethambile ifenisha ethambile eyenziwe ngezinto zensimbi noma ngensimbi nangokhuni njengamathambo, futhi ayikho ifenisha ye-software yamathambo, okungukuthi, ayinamathambo ngaphakathi, nefenisha yegwebu elenziwe amagwebu ngqo ngezinto ezenziwe ngamagwebu, kufaka phakathi ifenisha egcwalisekayo namanzi.
1. Ukotini usofa: imvelo enobungane futhi zikhululekile
Usofa wendwangu owenziwe ngokotini omsulwa uthambile, uyaphefumula, ungokwemvelo futhi ulungele imvelo. Isondele kakhulu esikhunjeni. Luhlobo oludume kakhulu emakethe. Isitayela se-Idyllic sisetshenziswa kakhulu kusofa okotini omsulwa.
2. Isofa le-Flannelette: lithambile futhi lithambile
Njengoboya besilwane esincane, into ehlaba umxhwele kakhulu ngosofa be-flannel ukuthinta kwayo okuhle nobumnene. Kusuka ku-corduroy esikhathini esidlule kuye ku-suede manje, usofa we-flannelette ushintsha isimo sawo nge-gaudy nenhle. Uma kuqhathaniswa nezinye izindwangu, usofa we-flannelette ubiza kakhulu.
3. Isofa lelineni: lifudumele ebusika futhi lipholile ehlobo
Kufudumele ebusika futhi kupholile ehlobo, ingxenye ekhanga kakhulu kusofa welineni ukuqhuba kwayo okuhle okushisayo. Noma kushisa ehlobo, ungakhathazeki ngokujuluka. Ikhwalithi yesofa yelineni isondele futhi ithambile, ilingene ekuqineni nasekuthambekeni, ngohlobo lwesimo esilula nesimvelo.
4. Usofa ohlanganisiwe: ofana nowemvelo
Ukotini ohlanganiswe nezinto zokwenziwa kwamakhemikhali zingaletha umphumela obonakalayo kasilika, i-flannelette noma i-hemp, kepha iphethini nombala akuzona ezemvelo futhi zimsulwa, futhi intengo ishibhile.